Toban Cunnooyinka Jidadka ugu Caansan Hindiya - Dalxiiska Dalxiiska Hindiya Tusaha Cunnada
Dadka xiiseeya cuntada, cuntadu waxay aad uga badan tahay 3 jeer oo keliya maalintii. Waxay sahamiyaan palette-ka cuntada si kasta oo suurtagal ah waxayna tijaabiyaan waxay cunayaan. Haddii aad wadaagto jacayl isku mid ah oo loogu talagalay cuntada waddooyinka, markaa cuntada dariiqa ee Hindiya waxay hubaal ahaan ku qancin doontaa cuntooyinkaaga cunto ee la filayo. Meel kasta oo Hindiya ka mid ah, waxaad ka heli doontaa ugu yaraan hal shay oo cunto ah oo xiiso leh oo aadan weligaa isku dayin. Ahaanshaha waddan kala duwan, qayb kasta oo Hindiya ka mid ah waxay leedahay wax gaar ah oo ay bixiso, laga bilaabo pani puri ee Delhi ilaa Kolkata's puchka ilaa Mumbai vada pav. Magaal kastaa waxay leedahay alaabo cunto oo muhiim u ah dhaqankeeda.
In kasta oo aanay suurtogal ahayn in la baadho oo aan la dhadhamin dhammaan cuntooyinka macaan ee waddooyinka ee waddanku u baahan yahay, haddana waxa hubaal ah in ay suurtogal tahay in aad doorato oo aad doorato inta ugu wanaagsan, si ay kaaga caawiso hawshan waxa aanu diyaarinay blog-kan. gaar ahaan adiga. Waxaan si taxadar leh u doorannay cuntooyinka ugu caansan iyo kuwa doorbida leh ee ku dhawaad ​​​​meel kasta oo dalka ah waxaanan ku xusnay maqaalka hoose. Sidan uma baahnid inaad wakhtigaaga ku lumiso inaad ku wareerto waxaad isku daydo iyo waxaad iska indho tireyso. Liisku wuxuu hubinayaa in dhammaan noocyada dhadhanka iyo dhadhanka lagu daro qofka tixraacaya liiskan, oo u dhexeeya walxaha basbaaska leh ilaa jalebis aad u macaan oo macaan! Waxaan u adeegnay dhammaan dhadhanka tijaabiyaha. U fiirso cuntooyinka hoos ku xusan oo arag haddii aad heli karto. Bon Appetit!
Mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan waddooyinka oo aad ka heli doonto ku dhawaad ​​magaalo kasta oo Hindiya ku taal, waa Panipuri mise waxaan dhahaa Puchka? Mise way fiicnaan doontaa haddii aan ugu yeedho Gol Gappe ama Gupchup ama Pani ke Patakhe? Haa, miyaanay ahayn wax waalan in hal shay oo cunto ahi leeyahay shan magac oo kala duwan! Tani waa sababta oo ah cuntada ayaa laga helaa ku dhawaad ​​magaalo kasta oo Hindiya ah waxaana loogu magac daray erey wadareed. Cuntada macaan waxaa lagu diyaariyey baradho la shiiday, dhir udgoon oo kala duwan ayaa lagu daray taas oo markaa lagu buuxiyo gudaha qaab-dhismeedyada kubbadda leh. Waxa kale oo ka buuxsamay biyo basbaas iyo dhanaan leh si ay u siiso midabka saxda ah. Haddii ay dhacdo inaad joogtid Hindiya, waa inaad gabi ahaanba u tagtaa shaygan aadka u caadiga ah ee aadka loo doorbido.
Aalu Chat mar kale waa cunto macaan oo Waqooyiga Hindiya ah oo caan ah laga helay gobollada Galbeedka Bengal, Bihar iyo Delhi. Waa mid ka mid ah cuntada ugu badan ee lagu talin karo ee aad isku dayi karto markaad joogtid Waqooyiga Hindiya. Cuntada waxaa lagu diyaariyaa baradho, xawaashyo kala duwan, caleen dhogor ah, mararka qaarkood basasha iyo yaanyo oo ku xiran gobolka shay ama mid kale ayaa lagu daraa ama laga jarayaa. Guud ahaan waxay dhadhamisaa basbas yar oo dhanaan, qaar ka mid ah iibiyeyaasha ayaa xitaa u macaan marka la codsado iyagoo ku daraya casiirka tamarind. Cuntadan waddooyinka ayaa sidoo kale ku badan dalka Pakistan iyo Bangladesh. Marka xigta ee aad booqato Waqooyiga Hindiya, iska hubi inaad gacmahaaga heshay Aalu Chat. Ma adka in la helo oo aad bay jeebka ugu habboon tahay.
xiriirka Taageerada Macmiilka e-Visa India wixii weydiin ah.
In kasta oo gobolka Punjab lagu taliyay in la tijaabiyo Chole Bhature ugu wanaagsan ee dalka, si kastaba ha ahaatee, sida aan ku horumaray tijaabo our cuntada iyo barashada iyo helitaanka dhaqamo cusub, oo dhan Waqooyiga Hindiya hadda waxay u adeegtaa Chole Bhature oo bushimaha ka dhufanaya saxankaaga. Waxaa ugu horrayn laga sameeyey digirta digirta oo baradhada waxaa laga diyaariyaa cajiinka caadiga ah. Cunto-cunista waa mid ku dhufatay Waqooyiga Hindiya, waxaana lagu talinayaa gaar ahaan markaad aad u gaajaysan tahay oo aad rabto wax buuxinaya, maaha mid aad u basbaas ah oo kaliya isku dhafka saxda ah ee macaan iyo dhanaan. xawaash kala duwan iyo mararka qaarkood sidoo kale curis ka hor inta aan la siin oo waa aad u fudud in laga helo cuntada wadada ee Delhi iyo Kolkata oo dhan. Halkii laguugu yeeri lahaa kaliya cuntada waddooyinka, waxaad xitaa ugu yeeri kartaa cuntadaada maalinta. Tirada cuntadu waxay ku filan tahay inay u adeegto ujeedada cunto buuxa. Ha ka maqnaan India Chole Bhature inta aad halkan joogtid!
Haddii aad dhacdo inaad u safarto magaalada Mumbai, waxaad ogaan doontaa in kala badh dadka Mumbai ay ku tiirsan yihiin Vada Pav oo aad u macaan cunto fudud oo fiidkii ah. Qaarkood xitaa waxay door bidaan cuntada waddooyinka quraacdooda ama xitaa qadadooda. Vada Pav guud ahaan waxaa laga sameeyaa baradhada la shiiday iyo rootiga. Shayga cuntada waxa lagu soo bandhigaa qaab sidan oo kale ah oo lagu daray dhammaan uunsiga lagu daray iyo gacmaha saxda ah si loo diyaariyo natiijada saxda ah ee qofka cunaya aanu dafiri karin inay ka sarreeyaan cuntada waddooyinku kuwa kale. Sidoo kale waa mid ka mid ah cuntada ugu jaban ee waddooyinka ee aad waligaa la kulmi doonto. Inkasta oo hadda cuntadan waddada laga helo ku dhawaad ​​dhammaan Waqooyiga Hindiya, nuxurka dhabta ah waxaa kaliya oo laga dareemi karaa gobolka Maharashtra halkaas oo xididada ay leeyihiin.
Ku dhawaad ​​meel kasta oo magaalada ka mid ah fiidkii, waxa aad arkaysaa dad dhawra oo cuntada diyaarinaya iyo dad buux dhaafiyey gaadhiga iibiyaha. Cuntadani waa wax aadan awoodin inaad ku dhaafto!
Tixraac Degdeg ah Hindiya e-Visa (Hindiya Visa Online).
Ghugni waa cunto kale oo si caadi ah uga dhacda guud ahaan Waqooyiga Hindiya. Waa cunto fudud oo aad u fudud, waxaana lagu dhadhamiyaa qaabka loo horgeeyo qofka wax cunaya. Saxanka waxaa ugu horrayn laga soo diyaariyaa digirta laakiin dhadhanka ayaa ka soo baxa xawaashyada iyo maaddooyinka loo isticmaalo qurxinta cuntada waddooyinka. ghugni ee loogu adeego waddooyinka Kolkata ayaa si weyn loogu talin lahaa, in kastoo, aad xitaa sahamin kartaa shaygan cuntada qaybaha kale ee Waqooyi-Bari ee Hindiya. Sidoo kale waa jeeb saaxiibtinimo leh oo dhadhamiya inta badan basbaas, si kastaba ha noqotee, iibiyeyaasha qaarkood waxay ku diyaariyaan casiir tamarind taas oo ka dhigaysa basbaas iyo dhanaan.
Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo inta ugu badan ee cunnooyinka waddooyinka oo dhan af-jabiya. Rolls waa mid ku takhasusay Waqooyiga Hindiya waxaana jira noocyo kala duwan oo duub ah oo aad ku dari karto, laga bilaabo duubista khudradda halkaasoo paratha laga sameeyay cajiinka caadiga ah waxaana ka buuxsamay qajaar, basasha iyo xawaash badan iyo suugo. Mararka qaarkood baradhada la shiiday iyo farmaajo cariish la shiiday ayaa sidoo kale lagu daraa. Kadibna waxaad haysataa duub digaag ah iyo duub ukun leh oo isku mid ah, kaliya baradhada la jajabiyey waxaa lagu beddelayaa digaag la jarjaray iyo ukumo la tumay. Si aad cuntada waddada uga dhigto mid dhadhan fiican leh, iibiyuhu wuxuu marmar ku daraa farmaajo iyo subag la shiiday si aadan weligaa u iloobin wixii macaanaa ee aad lahayd. Cuntadani waxay u hoggaansantaa mudnaanta koowaad.
Haddii ay dhacdo inaad booqato mid ka mid ah gobollada waqooyiga Hindiya, magaalada Delhi iyo Kolkata si kastaba ha ahaatee waxay u adeegtaa duubista ugu fiican ilaa maanta. Waa macaan aanad kaliya seegi karin. Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad cunto waddo ahaan u ahaato qadadaada sababtoo ah aad bay u buuxsantay in la helo.
Pav Bhaji waa boqoradda dhammaan cuntooyinka waddooyinka haddaad na maqasho. Waa ta ugu macaan dhammaan baradhada la shiiday ee aad waligaa yeelan doonto noloshaada oo dhan. Erayga 'pav' macnaheedu waa rooti waxaana laga soo diyaariyey cajiinka caadiga ah. 'Bhaji' oo macneheedu yahay curry waxaa lagu diyaariyaa baradho la kariyey oo lagu daray noocyo kala duwan oo maaddooyin ah ka dibna lagu walaaqayo subagga. Cuntada waddooyinku waa caan Hindiya oo dhan, waa mid aad u fudud isticmaalka waana mid ka mid ah kuwa ugu jaban ee badan. Waxaad ka heli doontaa waddooyinka magaalooyinka Waqooyiga Hindiya oo ay ku xardhan yihiin saldhigyo iibiyayaal Pav Bhaji. Waa mid ka mid ah quraacda ugu badan ee dadka magaalada deggan. Dadku xitaa waxay ku diyaariyaan cuntadan guriga sababtoo ah cunto karintu waa mid sahlan oo sahlan in la fuliyo. Haddii aad rabto inaad ku haysato Pav Bhaji ugu fiican Hindiya, waa inaad toos ugu socotaa Delhi. Magaaladu waxay iibisaa mid ka mid ah Pav Bhajis ugu macaan ee aad waligaa ku yeelan doonto Hindiya.
Cuntadani waxay si gaar ah ugu socotaa kuwa ilig macaan leh oo aan u adkaysan karin dhawaaqa shay sonkor leh iyo waraabinta afka. Jaleebi waa saxan macaan taas oo loo adeego ku dhawaad ​​meel kasta oo Hindiya ah, waxaad sidoo kale sheegi kartaa inay tahay macmacaan sababtoo ah dadka qaarkiis waxay door bidaan inay helaan cunto wanaagsan ka dib. Waa saxan macaan oo qaabaysan oo wareegsan oo lagu diyaariyo saliid kulul, cunto karisku guud ahaan waxa uu ku duubaa buufinta maro oo dalool yar oo marada ah ayuu daloolinayaa saliidda karkaraya isaga oo nakhshad ka samaynaya habka shubista. Waa arrin xiiso leh in la daawado, saxankuna waa wax jannada iska leh. Way fiicantahay haddii aad haysato jaleebi adigoo kuleyl ku jira oo mar aad dhadhamiso aadan awoodin inaad hal mar istaagto.
Sameeyayaasha Jaleebi way fududahay in la helo, cuntaduna xataa kharash badan kuma bixiso. Shaygan gaarka ah ee cuntada waddada waa mid aad loogu talinayaa dadka da' kasta leh iyo kuwa aan u dulqaadan karin cuntooyinka basbaaska leh ama dhanaan waxay hubaal ahaan isku dayi karaan sixirkan macaan.
Tixraac Habka Codsiga Fiisaha ee Hindiya e-Visa.
Shaygan cuntada waddada waa wax aad loo isticmaalo-cuntada ka fog waddooyinka Bihar iyo Jharkhand, oo sidoo kale asal ahaan ka soo jeeda Litti Chokha. Litti waxaa lagu diyaariyaa cajiinka caadiga ah iyo chokha waxaa lagu diyaariyaa baradho la shiiday, basbaaska iyo uunsi kale oo badan oo kala duwan. Litti ayaa la dubay iyadoo Chokha lagu diyaariyo qadar yar oo saliid ah. Litti Chokha waxa kale oo ay samaysaa cuntada aasaasiga ah ee dadka Bihar, haddii ay dhacdo inaad booqato gobolka Bihar waa inaad hubaal isku daydaa quraacda Litti Chokha.
Akki roti waa cunto waddo aad u caan ah oo laga isticmaalo Koonfurta Hindiya laga helay meel walba oo ku taal Koonfurta Hindiya. Saxanku waa qayb ka mid ah Koonfurta Hindida waxayna u samaysaa quraac joogto ah dad badan. Erayga 'Akki' waxay u taagan tahay roti ama rooti fidsan. Roti waxaa lagu diyaariyaa in lagu qaso daqiiqda iyo khudaarta kala duwan (sida aad dooratay). Waxaad dooran kartaa inaad ku barato cunto karinta waxa dhammaan lagu daro ama laga jarayo buufinta. Marka la diyaariyo, Akki Roti waxaa lagu cunaa qumbaha chutney ama nooc ka mid ah chatni gaar ah oo uu diyaariyo cunto kariye. Cuntadan waddooyinku waxay ku taal oo keliya gobolka Koonfurta Hindiya, haddii ay dhacdo inaad booqato meesha fadlan isku day Akki roti maadaama ay sidoo kale caafimaadka u tahay jirkaaga oo aad u macaan carrabkaaga.